fahaiza-miaina – Blaogin'i Voniary
Étiquette : fahaiza-miaina
Fikolokoloana ny fo : Hiaino izay fihetseham-po ateraky ny zavatra andalovanao fa misy fampianarana ao ambadik’izy ireny
Tamin'ny heriny, nentina teto ny fikarakarana vatana eo amin'ny vehivavy. Ary eo amin'ny lehilahy? Indro resahina amintsika anio indray izany. Tovolahy iray mpampianatra filozofia, Tsirery Chris, no nanontanianay mikasika ny antony ilana ny fikarakarana vatana sy ny fomba atao amin'izany. Tsirery Chris, mpampianatra filozofia eny amin’ny Anjery manontolo, very 10 kilao Miray Lalaina: Ilaina ve... Lire la Suite →
Aza menatra miainga amin’ny kely
Na eo amin’ny sehatry ny asa, fananganana orinasa, tokantrano, fiharin-karena, fianarana dia mahatsara zavatra ny fiaingana amin’ny ambany avy eo miakatra tsikelikely. Lalàna voajanaharin'ny fitomboana Vao teraka ny OLOMBELONA iray dia tsy mahafantatra na inona na inona, avy eo mahay miarin-doha, mipetraka, mandady, mitsangana ary mandeha. Ny ZAVA-MANIRY indray dia miainga amin’ny voa nafafy na... Lire la Suite →